खोला भित्रको ढुङ्गा निकालेर बेच्दै परिवार पाल्ने सुन्दरीको जादुमय स्वर, गरिबीमा लुकेको ढुङ्गावालीको सबैलाई चकित पार्ने आवाज ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 12, 2021 AdminLeaveaComment on खोला भित्रको ढुङ्गा निकालेर बेच्दै परिवार पाल्ने सुन्दरीको जादुमय स्वर, गरिबीमा लुकेको ढुङ्गावालीको सबैलाई चकित पार्ने आवाज ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
उनका बुबाले आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण आफुले छोरिको गायिका बन्ने सपना पूरा गर्न नसकेको बताउदै आँसु झारेका थिए । उनलाई सल्लाह सुझाब अनि केहि सहयोग गर्न चाहनेले सुपर अनलाइन टिभिका समीर सुबेदीलाई ९८१४९३०७३६ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । बोल्दा बोल्दै एक्कासि रुन थालेकी रोदाले मनै छुने गितहरु एकपछी अर्को गर्दै यसरी सुनाइन ।
तलको भिडियोमा हेर्नुहोला आँसु आउनेछ:
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ २१ गते शुक्रबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ जुन ०४ तारिख
अन्ततः सपनाले विनयजङ्गलाई पुर्याएरै छाडिन् हिरासत…..